I-B&B Al Vicolo del Gallo Boutique kunye neNtsapho
ULisa unezimvo eziyi-39 zezinye iindawo.
Indawo yokuhlala ekwiziko lembali laseVarallo apho ixesha elidlulileyo kunye nomxube wangoku ukunika iimvakalelo ezinzulu kunye namava. Ukuhamba ecaleni kophawu lweVicolo del Gallo, ufika kwintendelezo ethe cwaka kwaye ethe cwaka engqongwe zizindlu zakudala zenkulungwane ye-17. Kumgangatho wokuqala kunye nesango elizimeleyo elizimeleyo elinamagumbi amabini abucala ngaphandle kweendawo eziqhelekileyo, ezibandakanya igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye nendawo yokuhlala eyahlukileyo, eneesofa ezimbini ezinokuguqulwa zibe ziibhedi ezitofotofo, ibalcony ejonge umlambo.
Indawo yokuhlala ebanzi kwaye ephumlayo epheleleyo ebonelela ngamagqabantshintshi amaninzi eendlela zakudala. Ngaphandle kweendawo eziqhelekileyo, zabucala ngokupheleleyo. Indawo yeNursery enikezelwe kwiintsapho ezinetafile etshintshayo, imidlalo kunye nesitulo esiphezulu esifumanekayo kubantwana abancinci. Ibhedi yongezwa ngesicelo.